यो दशैंमा ढुक्क भएर सुजुकी बाईक चढ्नुस | bethanchokkhabar.com
यो दशैंमा ढुक्क भएर सुजुकी बाईक चढ्नुस
मंगलबार, आश्विन ०२, २०७५ | १२:०६:५२ |
संचालक पिजी अटोमोवाईल्स, बनेपा
काभ्रे बनेपाका युवा उद्यमी नवराज मानन्धर जहिले पनि नयाँ सोच र दृष्टिकोण राख्ने युवा भित्र पर्दछन् । उनले विगतदेखि जुन क्षेत्रमा हात हालेका छन् सुरुमा सुझबुझपुर्ण निर्णय लिएर मात्रै हात हाल्ने गरेका छन् । केही बर्षदेखि काभ्रे तथा आसपासका जिल्लाहरुको बजारलाई ध्यानमा राखेर उनले सुजुकी मोटरसाईकलको सोरुम बनेपामा स्थापित गरेका छन् । बजारमा के चलेको छ हैन कुन मोटरसाईकल राम्रो हो भनेर बुझेरनै सुजुकी ब्राण्ड आफूले रोजेको नवराज बताउँछन् । जापानीज बलियो कम्पनी, त्यसमा युवादेखि महिलासम्म र जुनसुकै उमेर समुहका मानिसहरुका लागि उपयुक्त बाईक तथा स्कूटर सुजुकी कम्पनीको भएकाले आफू त्यसतर्फ आकर्षित भएको मानन्धर सुनाउँछन् ।
अरु कम्पनीले के भन्छ र साथीहरुले के गर्नुहुन्छ मलाई त्यसको धेरै ज्ञान छैन तर एउटा बाईक बेच्छु । ग्राहकले पुनः सिकायत लिएर हामीकोमा आउने मौका दिनेछैन । हजारौं,सयौं बाईक बेच्नेहरुको भिडमा सुजुकी पनि बिक्री होला र भन्नेहरु पनि थिए । तर सडकमा सुजुकी बाईकको उपस्थिती के छ त्यो सबैलाई थाहा छ मानन्धर सुजुकी बाईक बेचेको पाँच बर्षको अनुभव सुनाउँछन् । उनै युवा उद्यमी मानन्धरसँग सुजुकी मोटरसाईकलका विशेषता दशै तिहारको छुटका बिषयमा गरिएको कुराकानीको अंश :
किन सुजुकी बाईक चढ्ने ?
सवारी साधन तरकारी किनेको जस्तै हैन । तरकारी हामी दैनिक किन्छौ तर सवारी साधन जीवनभरमा एक÷दुई पटकमात्रै किन्छौ । जीवनको कमाई र सुरक्षा हामीले सवारी साधनमा लगानी गरेका हुन्छौ । त्यसैले जीवनमै कमाई लगानी गर्ने सवारी साधनहरु किन्दा हामीले सावधानी अपनाउने की नपनाउने । बलियो र विश्व विख्यात कम्पनीको मोटरसाईकल किन्ने की नकिन्ने । त्यसको निर्णय तपाईहरुले सुरुमै गर्नुपर्छ । मोटरसाईकल किनेर समस्या आएपछि हैन ।
सबैले आफ्नो दावी छ । सबैले आफ्नो राम्रो भन्छन् तर प्रमाणीत गर्न सक्ने हिसावले हामी हाम्रा कम्पनीका मोटरसाईकल र स्कुटर राम्रा भन्न सक्छौ । नामनै काफी छ,सुजुकी । मोटरसाईकल किनेको १ बर्षमै ईञ्जिन बनाउने समस्या । अरुमा वारेन्टी र ग्यारेन्टी तर ईञ्जिन र व्याट्रीमा कुनै पनि कम्पनीले ग्यारेन्टी नदिने । सबैले छातीमा हात राखेर भनौ । नेपालमा सुजुकी कम्पनी छिरेपछि ईञ्जिनमा पाँच बर्षको वारेन्टी कसले दिन थाल्यो । अरु कम्पनीले जुन कुरामा वारेन्टी दिने आट गर्न सकेको थिएन । हामीले त्यसैमा वारेन्टी दिने व्यवस्थाको सुरुवात गरेका छौ । व्याट्रीमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ । ग्राहक झुक्याउने काम भैरहेको रहेछ नी । हामीले किन पाँच बर्ष ईञ्जिन वारेन्टी दिन सक्यौ , त्यो भनेको हाम्रा बाईक तथा स्कुटर बलिया छन् ।
सडकमा उच्च माईलेज दिन सक्छन् । पार्टस् मुख्य शहरहरुमा उपलब्ध छन् । पार्टस्हरु बलिया र भरपर्दा छन् । त्यसैले गुड लुक्ससँगै सुपथ मूल्य र राम्रो बलियो बाईक भएकै कारण सुजुकी ब्राण्ड प्रयोग गर्ने हो ।
–यस्तो अफर अरु मोटरसाईकलले पनि दिए होलान ?
आरामदायी, जस्तोसुकै पहाड तथा कच्चीवाटोमा आरामदायी रुपमा गुड्ने, राम्रो पिकअप र माईलेज, गुड लुक्स, सबै उमेर समुह सुहाउँदो, आन्तरिक उच्च सुरक्षा भएको, ६ गियर क्षमताका मोटरसाईकल, बाईकमा मोवाईल चार्ज, घडी, सुरक्षा ईन्डिकेटर भएका मोटरसाईकल सस्तो सुलभ दाममा पाउन सक्नु हुनेछ ।
अरु मोटरसाईकल कम्पनीको विरोध जायज नहोला तर हाम्रो मोटरसाईकल राम्रा भरपर्दा र बलिया छन् । त्यसैले सुजुकीलाई रोज्दा तपाईहरुको बुद्धिमता देखिन्छ ।
बनेपामा कसरी किन्ने कहा छ तपाईको सोरुम ?
बनेपाको व्यस्त चोक तीनदोवाटो पुरानो लक्ष्मी बैकसँगै हाम्रो सोरुम रहेको छ । हाम्रो सोरुममा कम्पनीले सार्वजनिक गरेका सबै मोडलका बाईक र स्कूटी छन् । हामीले पर्वको अवसरमा छुटनै छुटको व्यवस्था गरेका छौ । बाईकको खरिदमा ८ हजार स्कुटीको खरिदमा १० हजारको छुट सुविधा रहेको छ । त्यसको साथै हामीले दशै तिहारको अवसरमा बाईक किन्ने १० जनालाई जापान जाने अवसर समेत दिनेछौ ।
तपाइको कम्पनीको कुन मोडलका बाईक धेरै बिक्री भैरहेका छन् ?
सबैको च्वाईस फरक फरक खालका रहन्छन् । हाम्रो कम्पनीका सबै उत्पादनहरुको बिक्री राम्रो छ । तर पनि युवाहरुले जिक्सर बाईक र एक्सिस स्कुटीलाई धेरै मन पराउनु भएको छ । त्यसका साथै उमेर समुहको आधारमा रोजाईको फरक फरक हुने गरेका छन् । हामीले हरेक उमेर समुहको रोजाईलाई ध्यानमा राखेर बिक्री गर्ने गरेका छौ ।
जीवनमा एक पटक सवारी साधन किन्ने भएकाले एक पटक सोचेर बुझेर मात्रै फैसला गर्न हुन अनुरोध गर्दछु । सबैलाई नयाँ बर्ष,दिपावली, नेपाल संम्वत र छठको शुभकामना ।